गिजाकाे समस्या देखी छाती दुख्ने समस्या सम्म राहात मिल्छ ल्वाङ चिया पिउनुदा, जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
तपाई हामी दिनको सुरुवात चिया वा कफीबाट गर्ने गर्छौं । चिया पिउदा कसैले अदुवा राखेर पिउन मन पराउँछन् भने कसैले ग्रीन टी पिउन मन पराउँछन् । त्यति मात्र नभई कसैले ब्ल्याक टी पिउन रुचाउँछन् भने कसैले लेमन टी रुचाउँछन् । तर, के तपाईंले ल्वाङ राखेको चिया कहिल्यै पिउनु भएको छ ? ल्वाङ राखेको चियाले चियाको तलतल मात्रै मेटाउँदैन स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै फाइदा गर्छ ।
Up Next दुधलाई कुन समयमा पिउदा फाइदा हुन्छ, यसलाई कसरी पिउने ?
अनुहार चाउरी पर्न थाल्यो ? यी फलफूलले चाउरी पन हटाई अनुहार आकर्षण बनाउन गर्दछ